सरकार-विप्लव वार्ताको तीव्र तयारी « Khabar24Nepal
फागुन १९, काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे आन्तरिक सहमतिसँगै औपचारिक वार्ता सुरु हुँदै छ। दुवै पक्षले मंगलबार आआफ्ना तर्फबाट दुई–दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन्। सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता टोली गठन गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसको एक घण्टापछि विप्लव पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरिएको वक्तव्य निकालेको थियो। उक्त समूहले पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो। विप्लवको वार्ता टोलीका नेता सोमबार साँझै काठमाडौं भित्रिएका छन्। उनीहरूले मंगलबार साँझ टेलिफोनमार्फत सरकारी टोलीसँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन्। दुवै पक्षबीच बुधबार औपचारिक वार्ता गर्ने तयारी छ।
कुँवर नेकपा विभाजनपछि खुलेर कतै लागेका छैनन्। उनी एकीकृत पार्टी छँदाका केन्द्रीय सदस्य हुन्। पार्टी विभाजनपछि पनि मन्त्री थापाले जिम्मेवारी अनुसारको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि कुँवरले थप प्रयास जारी राखेका थिए। विप्लव र चलाउनेसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली घोषणापछि मंगलबार कुँवरले सिंहदरबार पुगेर थापालाई भेट गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुवै पक्ष अनौपचारिक छलफलमा थिए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने पनि प्रचण्ड–नेपालले वार्ता गर्ने भनिसकेका छन्, उनीहरूले गरिहाल्छन्, हामीलाई अपजस मात्र हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीमा देखिन्थ्यो। पुनःस्थापना भएन र चुनावमा जानुपर्‍यो भने विप्लवसँग, प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउवा कोकोसँग लड्ने भन्नेमा ओली थिए। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले हामीसँग वार्ता गरेर एउटा पक्षलाई तटस्थ राखेर लडाइँलाई एकातिर सोझ्याउन खोज्नुभएको अवस्थामा सघन छलफल हामी दुई पक्षका बीचमा सुरु भएको थियो’, विप्लवका एक नेताले टेलिफोनमा भने, ‘हामीलाई पनि जसरी भए पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्तामा आउनु थियो, दुवैको आआफ्नो बुझाइअनुसार नै अहिले वार्ताको वातावरण बनेको हो।’
प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजनपछि आफ्नो अप्ठ्यारो टार्न र अर्को खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साइजमा ल्याउन भए पनि विप्लवसँग वार्ता चाहेका थिए। त्यसपछि नै गृहमन्त्री थापाले त्यो जिम्मा पाएका थिए। गृहमन्त्री थापाले आफूजस्तै स्वभाव भएका तर विप्लव र उनका नेताहरूसँग राम्रो सम्पर्क सम्बन्धमै रहेका विश्वासिला नेता कुँवरलाई परिचालन गरेका थिए। कुँवरले आफूजस्तै सैन्य क्षेत्रमै काम गरेका विप्लवका नेता चलाउनेसँग सरकारका कुरा पुर्‍याउने र विप्लवका कुरा ल्याउने गरी सम्पर्क सूत्रका रूपमा काम गरे। सरकारले वार्ताअघि शान्तिपूर्ण र वैधानिक राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता विप्लवको पक्षबाट खोजेको थियो। त्यसपछि नै औपचारिक वार्ता अगाडि लिखित रूपमा आन्तरिक सहमति गर्ने समझदारी बनेको ती नेताले बताए।
‘त्यो बुँदा राजनीतिक छन्। त्यो अहिले सार्वजनिक हुँदैनन्’, विप्लवका एक नेताले भने, ‘त्यसैलाई टेकेर वार्ता टोली गठन भएको छ। अबवार्ता टोलीले औपचारिक वार्ता थालेर प्रतिबन्ध फुकुवा लगायतका काम हुनेछन्।’
सत्ता साझेदारी या अन्य कुनै विषय त्यो बुँदामा हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। तर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका बारेमा राज्यका आफ्ना धारणा के हो ? विद्रोहीका यसमा के धारणा हुन् भनेर तलसम्म जाने वातावरण निर्माण गर्ने कुरा त्यो बुँदामा उल्लेख रहेको विप्लव नेतृत्वका अर्का एक नेताले बताए।
वार्तामा यो पक्षले तीन सूत्रीय एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा, बन्दी रिहाइलगायतका विषय अगाडि बढेसँगै बृहत् राजनीतिक समीक्षा सभा, संयुक्त सरकार र त्यही सरकारको अगुवाइमा संसदीय व्यवस्था ९पुँजीवाद०या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने गरी जनमत संग्रहको एजेन्डा उठाउने तयारी विप्लवको पार्टीले गरेको छ।
तर जनमत संग्रहका विषयमा रणनीतिक मोर्चामा आबद्ध दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने विप्लवको पार्टी नेताको भनाइ छ। ‘हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल छ। रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा पनि छलफल गर्नुपर्छ। विधिमा अहिले किन प्रवेश गर्ने भन्ने भएर त्यसमा हामीले अलिक भेगवाला शब्द प्रयोग गरेको हो’ ती नेताले भने। दुवै वार्ता टोलीको नेतृत्वकर्ता पाँच वर्षअघिसम्म एकै पार्टीमा थिए। यसले पनि यो वार्तालाई रोचक मोडका साथ हेरिएको छ।
सरकार र विप्लव समूह दुवैले मंगलबार वार्ता समूह गठन गरेका हुन्। सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लवको वार्ता टोलीको नेतृत्व खड्गबहादुर विश्वकर्माले गरेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा रहेको छ ।
गोरखामा पाँच दिनमा, तीन बलात्कार
आगलागीमा परी ६ जनाको मृत्यु